पर्यटन प्रवर्द्धनमा खेलकुदको महत्वपूर्ण भूमिका : पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ। पर्यटन, संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि खेलकुद क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । उनले हिउँमा खेलिने साहसिक खेलहरुको प्रवद्र्धनले नेपालमा पर्यटक भित्राउन
एल.ओ.डी. डिजे म्याग ‘टप १००’ को ५२ औं स्थानमा
काठमाडौं। लर्ड अफ द ड्रिंक्स (एल.ओ.डी.) ले डिजे म्याग ‘टप १००’ मा विश्वभरिमा ५२ औं स्थान हासिल गरेको छ । एल.ओ.डी.ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँमा उत्पादन हुने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर मलको हाहाकारलाई केही कम सकिने र यसका लागि महानगरपालिका क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
विपद्को सामना एकीकृत प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ : गृहमन्त्री खाण
काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विपद्को सामना एकीकृत प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनु भएको छ । मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य बैठकमा सहभागी विपदमा समन्वय गर्नुपर्ने सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै सरकारको मुख्य
पोखरा। हरेक वर्षजस्तै यसवर्ष पनि पोखरामा असारे महोत्सव आयोजना भएको छ । पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा पोखरा २५ हेमजामा रोपाईं महोत्सव गरिएको हो । विदेशी र स्वदेशी पर्यटकलाई सबै मौसममा
काठमाडौं । सेयर बजारमा बुधबार सकारात्मक माहाेल देखिएकाे छ । नेप्से परिसूचकसँगै काराेबार रकम पनि वृद्धि भएकाे छ । नेप्सेमा राैनकता छाउँदा लगानीकर्ता उत्साहित छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार
एजेन्सी । जर्मनीमा ८ दिनदेखि हराइरहेका एक बालक ढलमा जीवितै फेला परेका छन् । बीबीसीका अनुसार जोइ नामले चिनिने ती बालक १७ जुनमा पारिवारिक बगैंचाबाट हराएका थिए । जसका कारण
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ । एकै दिन देशभर थप ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार
बैतडी । बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका-६को बांगाबगरमा अटोरिक्सा र मोटरसाइकल ठोक्किदा पाँच जना घाइते भएका छन् । सु.प.प्र.०२००३प ९३६७ नम्बरको मोटरसाइकलल र सु.प.प्र.०१ ००१ह ४९६७ नम्बरको अटो रिक्सा ठोक्किएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु बढिरहेको देखाएकाले बेरुजु फछ्र्याैटलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
चिकित्सक संघले डाक्टर कुट्ने ट्राफिकलाई कानूनी कारवाही र घाईतेको उपचार खर्च माग्यो
काठमाडौँ। सडक पेटीमा हिडिरहेका चिकित्सकलाई ट्राफिक प्रहरीले कुटपिट गरेको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७९ आषाढ १२ गते आईतबार संघका आजीवन सदस्य डा.कुलबहादुर घिसिङ पैदल हिडिरहेको अवस्थामा
फेसबुकबाट माया जालमा पारेर महिलाको गरगहना लुट्ने युवक पक्राउ
रौतहट । फेसबुकबाट माया जालमा पारेर महिलाको चल अचल सम्पति लुटने एक युवक पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा बाराको प्रसौनी गाउपालिका वडानम्बर ४ खुटुवा प्रसौनी निवासी ३६ वर्षीय महमद
मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफल हुन नसकेपछि एमाले संसदीय
काठमाडौँ। बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी चितवन शिवनगर गा.वि.स.वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं का.म.न.पा.- २ बस्ने ४१ बर्षीया बबिता पन्त पौडेललाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत
बैतडी। बलात्कारको आरोपमा एक वडाध्यक्षससिहत दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउपर्नेमा जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शरदसिंह नेगी र सोही ठाउँका केशवसिंह नेगी रहेका छन् । एक २८ वर्षीया
बर्षाका कारण डुवानमा परेकाहरुको उद्धारमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता
काठमाडौँ । अबिरल बर्षाको कारण असार १४ गते विभिन्न स्थानमा डुवानमा परेका करीब २८८ घरका करीब ९३४ जना व्यक्तिहरुलाई सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ । झापा
उदयपुर । त्रियुगा नगरपालिका–३ स्थित उर्जा पेट्रोल पम्पको काउन्टरबाट ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नगर चोरी गरेको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँ बस्ने
दाङ । दाङमा १७ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । उनलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा बबई गाउँपालिका–२ बस्ने ३५ वर्षीय बाबुराम थापालाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही ठाउँको बिजय
राप्तीमा पानीको सतह बढ्यो , सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह
राँझा । राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । गत मध्यरातबाट परेको अविरल वर्षाका कारण नदीमा बाढीको सतह बढ्दै
चपली सवस्टेसनको ट्रान्सफर्मरमा समस्या, बूढानिलकण्ठ क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति बन्द
काठमाडौँ। बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको चपलीस्थित चपली सवस्टेसनको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको छ । सवस्टेसनमा रहेका १०÷१० एमभिए क्षमताका तीनवटा ट्रान्सफर्मरहरुमध्ये एउटामा बुधबार बिहान ५ बजेतिरबाट समस्या देखिएको हो । ट्रान्सफर्मरमा समस्या